Waajjirri Olaanaa ABO Finfinnee Kutaa Bulchiinsa Gullallee waggaa 27 booda deebi’e – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaajjirri Olaanaa ABO Finfinnee Kutaa Bulchiinsa Gullallee waggaa 27 booda deebi’e
Waajjira Olaanaa ABO Gullallee
Waajjirri olaanaa ABO duraanii magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Gullallee ture har’a deebi’uusaa Miseensi Gumii Sabaa ABO Obbo Qajeelaa Mardaasaa BBCtti himan.
Mootummaan Itoophiyaa fi ABO akkataadhuma Eertiraatti walii galaniin hojiitti hiikuu jalqabaniiru.
Torban darbe magaala Finfinneetti marii mootummaa naannoo Oromiyaa waliin gaggeesaniin waliigalteewwan irra gahaman osoo lafarra hin harkisiin raawwachuu akka qaban gama lamaaninuu ibsaniiru.
Waliigalteewwan isaanii keessaa toko qabeenyi ABO qaama garaagaraan harkaa fuudhamee fi saamamee ture akka deebi’uuf waliin hojjechuu kan jedhu ture.
Kanarraa ka’uunis waajjirri olaanaa ABO waggota 27 oliif harkaa bahee dhabbanni biraa itti fayyadamaa ture murtoo mootummaan dabarseen har’a gariin deebi’eera.
Dhaabbanni itti fayyadamaa ture meeshaa hedduu waan qabuuf yeroo gabaabaa keessatti gadhiisee bahuu waan hin dandeenyeef jala jalaan gad lakkisuuf walakkaa isaa nuuf kennaniiru jedhan Obbo Qajeelaa Mardaasaa.
Waajjiricha keessa meeshaaleen biiroo turan haala akkamiin deebi’an kan jedhu ilaalchisee ragaaleen ABO fi meeshaaleen waajjira keenyaa tokkollee ammaaf hin argamne jedhan.
Fuulduratti dhimma kana irratti mootummaa waliin hojjenna kan jedhan Obbo Qajeelaan waajjirri seena qabeessa tahe Gullallee garuu seeraan eebbifamee yeroo gabaabaatti hojii jalqaba jedhan.
Dabalataan qabeenyi mooricha keessa jiruu fi manneetii haaraan erga ABO’n biyyaa bahee achi keessatti ijaaraman guutummaatti ABO’f akka kennaman mootummaa waliin wal taanee jirra jedhan.
Manneetiin waliinii ykn kondominiyemiin achi keessa jirus akkasuma qaama waajjirichaa akka tahu BBCtti himaniiru.
“Qawween siyaasa keessaa akka bahu waligalleerra”
‘Gaaffii Oromootu ABO dhalche’
Qondaaltotni Itoophiyaa Asmaraatti Imbaasii Itoophiyaa daawwatan
Gullalleen Lafa Seenaati
Artistootni Oromoo kan akka Nuhoo Goobanaa, ”Gullalleen lafa seenaati, baay’eedha kan siyaadatuu, Oromoon si hin irraanfatuu,” jechuun weellisaa ture.
Haacaaluu Hundeessaa akkasuma ”Gullalleen kan Tufaati,” jechuun sirba jaalatamaa weellisaa ture.
ABO’n qabsoo diddaa garbummaa gaggeessuuf kan hundeeffame bara 1973 magaala Finfinneetti ture.
Yeroo sana Finfinneetti hundaa’uun Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti qabsoo jalqabuun qabsoo hidhannoo gaggeessaa ture.
Bara 1991 yeroo mootummaan Dargii kufu ABO’n waajjira isaa olaanaa Gullallee qe’ee Tufaa Munaatti banate.
Yeroo sana uummatni Oromoo Bahaa fi Dhihaa, Kaabaa fi Kibbaa Gullallee teessoo Waajjira Olaanaa dhaabichaatti wal gahu ture jedhan Obbo Qajeelaan.
Haa tahu malee ABO’N akkuma Oromiyaa keessatti sochii siyaasaa karaa nagaa gaggeesuu jalqabeen osoo hin turiin yeroo hundeeffama mootummaa ce’umsaa paartilee kan akka Adda Bilisummaa Ummata Tigiraay waliin osoo wal hin tahiin waan hafeef chaartera keessaa bahuusaa beeksise.
Kanarraa ka’uun ammas irra deebiin qabsoo hidhannoo jalqabuun magaalaa Finfinnee keessaa yeroo bahu qabeenya hedduu dhabee akka ture Obbo Qajeelaa Mardaasaa dubbatu.
”Namootni yeroo sana hoggansa irra turan amma bakkicha jiraachuu baatanis qabeenya dhaaba keenyaa hedduu nu jalaa saamanii ture,” jedhan .
Qabeenyi yeroo sanaa wajjiraalee qofa osoo hin taane maallaqni miiliyoonota dabalatee konkolaataawan illee seeraan galmaa’anii mootummaaf galii tahan osoo hin taane ni saamaman jedhan.
Qabeenya keenya kan saame addatti gaafachuu baannus mootummaa Itoophiyaa yeroo sanas tahe ammas bulchaa ture waan taheef akka mootummaaatti gaafanna jedhan.
‘Nageenya Finfinnee eeguuf qophoofneerra,’ Poolisii Federaalaa
Mootummaan Itoophiyaa ABO waliin mari’achuf jila Eertiraatti erge
Amma maaliif Gullallee?
Obbo Qajeelaan magaalaa Finfinnee keessa gamoon dhibee osoo hin taane seenaa keenya eeguuf jecha waajjira keenya Gullallee gochuuf murteessine jedhan.
Gullalleen teessoo bulchiisa Oromoo ykn Caffee akka ture yaadachiisuun.
ABO’n waajjira isaa isa olaanaa seenaa waliin walitti hidhee deemuuf jechaafi waggaa tokkoof qofa taatus yeroo gabaabduu keessatti Gullallee yeroo ture hojii bal’aa waan hojjeteef ammas achumatti itti fufa jedhan.
Biyya keessaa fi alattis asumarraa kan hojjennu taha jedhan
Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessattis waajjira isaa banaa kan jiru ABO’n bakkeewwan tokko tokkotti kanneen dur itti fayyadamaa ture deebisee fudhachuun hojii jalqabsiisaa jira.
Erga biyyatti deebinee wantoota mootummaa waliin irratti wal taane hedduun hojiitti hiikamaa jiru kan jedhan miseensi Gumii Sabaa kun uummata keenya waliinis karaa nagaa deemnee dhiibbaa tokko malee marii gaggeessa jirra jedha.
Oduu Gammachiisaa! Gullallee biyya seenaa!
ABOn waajjira isaa seena qabeessa kan Gullallee dhuunfatee jira. Waajjirri kun haala miidhagaa ta’een eebbifamee hojiin keessatti eegalama. Waliigalteen Asmaraa hojiitti hiikamaa jira. Akka waliigaltee Asmaraatti waajjirri dur ABO irraa saamamee fi qabeenyi ORA (Oromo Relief Association) ni deebi’aaf. Waajjirri kun saaqamuun ABOn tasgabbaa’ee siyaasa isaa akka gaggeeffatuuf tumsa olaanaa qaba.